Bannaanbixii Berri ka dhici lahaa Muqdisho oo la hakiyey iyo Shir lagu baaqay (Yaa dhex galay..?) - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis. Bannaanbixii Berri ka dhici lahaa Muqdisho oo la hakiyey iyo Shir lagu baaqay (Yaa dhex galay..?) - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Bannaanbixii Berri ka dhici lahaa Muqdisho oo la hakiyey iyo Shir lagu baaqay (Yaa dhex galay..?)
Bannaanbixii loo balansanaa inuu Berri ka dhaco magaalada Muqdisho ayaa la hakiyey, kadib dadaal ay sameeyeen odayaasha dhaqanka Muqdisho.
Arrintan ayaa timid kulamo dhex maray qabanqaabiyeyaasha Bannaanbaxa iyo Odayaasha dhaqanka oo shirar la yeeshay dhinacyada isku diidanaa bannaanbaxaasi oo lagu taageerayey Ra’iisal wasaaraha, looga horjeeday madaxweynaha xilkiisu dhammaaday.
Ugaas Maxamuud Cali Ugaas ayaa sheegay inay laga aqbalay codsi ay wateen oo ahaa in la hakiyo bannaanbaxa, kadibna shir la isugu yimaado maalinta Axadda oo go’aan laga gaari doono waxa laga yeelayo iyo tallaabada la qaadayo.
Axmed Macalin Fiqi oo ka mid ahaa siyaasiyiinta hor-boodayey bannaanbaxa ayaa qoraal uu soo saaray ku yiri: “Maantay kulamo qaatay saacado dheer oo dhexmaray guddiyada qabanqaabada, madaxda golaha Bulshada Banaadir oo dhinaca iyo odoyaasha dhaqanka gobolka Banaadir oo dhinac ah iyo sidoo kale midowga musharixiinta oo aan xaruntooda kula kulannay, codsi ka kala yimid dhinacyadaas iyo dood dheer ka dib, waxaa la go’aamiyey in banaanbixiii Khamiista dib loo dhigo, maalinta Axadda ahna kulan odoyaasha dhaqanka iyo guddiyada qabanqaabada banaanbaxa ay dibisugu soo laabtaan si loo cayimo maalin la isla og yahay, la isla ogol yahay oo banaanbax uu dhaco”.
Previous articleSiciid Deni oo ku laabtay Garowe xilli ay xaalad Culus kasoo food saartay magaalada Boosaaso
Next articleSiyaasiyiin iyo Guddoomiyaha Barlamanka Puntland oo ka hor yimid Go’aankii Isimada Bari (Qoraal)